Biloogii akka itti jalqabe - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
By Alifu Haji	Career Life, Creative, Creativity, Ideas, Influence, Success, Suggestions, Technology March 12, 2019
Ana, Alifu dha. Akkaataa blog itti eegale waan muraasa isiniif qooda maxxansa kana keessatti. Waggoota muraasa gara duubaa isin deebisuufan. Isinis na faana deebitu jedheen yaada. Jalqaba bara 2013ti yeoon isaa. Waa’ee biloogii wanti an beeku baayee hin turre. Yeroo sanatti facebook qofa fayyadama moobaayila koo irratti.
Weebsaayitoonni gara garaa facebook irratti yoo hiraman nan arga. Namoonni hedduun weebsaayitii san irratti waan san argine yoo jedhan nan dhagaha. Gaafa namoonni websaayitii jedhan sammuu koo keessatti an maaliif weebsaayitii dhuunfaa kootii hin uumadhu gaafiin jedhu sammuu koo keessatti dhalatee. Toluma akka facebook banama se’a ture yeroo san. Garuu eessa irraa akka eegaluu qabu hin beeku ture. Moobayila koon akkaataa website uumuun itti danda’amu barbaacha jalqabe.
Deebiin an argadhu hedduun isaanii yeroo sanatti human kootii ol turan. Booda irratti osoma barbaadu marsariitii salphaa takkaan wal qunname. Namoonni hedduunis beektu jedheen yaada. Wapka.mobi marsariitii tana akka salphatti moobaayila irraa fayyadamuun ni danda’ama. Anis marsariitii tana irratti galmaa’uudhaan marsariitii salphaa takka uume. Erga uumees booda ammas waan tokkotu na dhibe. Yoon marsariitii koo kana kan nama biraan wal maddii qabee ilaalu kankoo baayee fokkataa fi ilaalchaaf kana namatti hin tolle ture. Akka kan isaanitti barreechisuun qorumsa natti tahe.
marsariitiin kun haala salphaan tajaajila tolaa marsariitii sub-domain isaaniitiin uumachuu kenna. Anis marsariitii www.aliifuu.yu.tl jedhamu sub-domain isaanii fayyadamee uume. Marsariitii kana irratti wanta heddu hojjachuuf baayee hin rakkanne. Maaliif wanta heddu hamma tokko hubadhee jira waan taheef.
Wantoota gara garaas marsariitii tana irratti maxxansuu jalqabe. Maxxansaaf wanti an xiyyeeffadhu homaayyuu hin turre. Kanuma abbaa fedhee gara galcheetan maxxansa ture. Afaan barbaadeen haa jiraatuu. Garuu, garagalchi calissee an maxxansu kun dhiibbaa akka marsariitii koof qabu homaayyuu hin beeku. Booda irratti dhiibbaa akka qabu gaafa hubadhu, maxxansa dhuunfaa koo barreessee achirratti maxxansuu eegale.
Hordoftoota heddus horachaan dhufe. Haala milkaa’aadhaan hamma xumura bara 2016 hanga www.mywapblog.com cufamutti itti fuufe. Gaafa marsariitiin kun tajaajila isaa kennuu dhaabu marsariitii haaraa seensa bara 2017tti( www.arsicha.info ) jedhu sarvarii haaraa irratti uume. Marsariitii haara kana Hamma danda’een tolchuu fi too’achuuf teeknoolojiilee haaraa hedduun wal bare. yeroo jalqabaatiif ture control panel saarvarii kan too’achuu qabe.
Maxxansoota haaraa fi barsiisoo tahan yeroon maxxansuu jalqabe. Itti fayyadamtoota heddus horate marsariitichi. Ji’atti hamma itti fayyadamtoota 50,000 ol qaba ture. Baayee guddaa ture. Giddumaan Google Adsense irratti galmaaye. Torbaan tokko osoo hin caalin Google Adsense marsariiticha irraa galii argachuu akka dandeenyu nuuf mirkanneese.
Ji’a tokko booda galii argachuun eegale. Haaluma Kanaan hamma walakkeessa bara 2018tti itti fuufe. Booda irratti marsariitii www.arsicha.info nama biraaf gurgure.
Ergas boodaadha marsariitiin kun www.barataa.com kan uume. Jalqaba gaafa marsariitii kana (www.barataa.com) uumu marsariitii hawaasni keenya yaadaa fi barnoota gara garaa irratti waliif dabarsu jedheen yaadee uumee ture. Garuu immoo namni keenya hedduun hubachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf jedhee gara marsariitii biloogiitti geeddaruuf dirqame.
Kutaa 2ffaan yeroo itti aanu wal argina!